Bolton oo bohol ku sii ridey bartii riyo ee Arsenal – SBC
Bolton oo bohol ku sii ridey bartii riyo ee Arsenal
Posted by editor on April 24, 2011 Comments
Rajadii caatada aheyd ee kooxda Arsenal ay ka qabtey ku guuleysiga horyaalka English Premiership-ka ayaa maanta mar kale bohol ku dhacay ka dib markii ciyaar wacdaro xoog lihi ka dhacay ay ku soo dhamaatey 2-1 oo ay guushu ku raacdey kooxdii martida loo ahaa ee Bolton Wanders. Weeraryahanka reer Chelsea Daniel Sturridge ee amaahda ula jooga Bolton ayaa taageerayaasha Arsenal uga naxsadey kubad soo laabalabatey oo uu madaxa ku galiyey shabaqa Arsenal oo sanadkan dafiic u muuqda kaasi oo ay haysato difaac la’aan, waxaase qaybtii dambe ee ciyaarta rigoore loo dhigay ciyaartoyda Boton, laakiin waxaa rigooradaasi diidey inay dhaagto goolhayaha 20-ka jirka ah ee Arsenal Wojciech Szczesny oo si caaqibo leh u badbaadiyey darbadii uu soo tuurey Kevin Davies.
Laakiin laba daqiiqo markii rigooraha ama goolku laadkaasi uu iska dayacay kabtanka Bolton weeraryahanka reer Holand Robin van Persie ayaa kubad caaqibo leh shabaqada Bolton ku hubsadey kaasi oo ciyaarta ka dhigay 1-1 waxaana neef weyni ka soo fudey macalin Arsene Wenger oo maanta cagaado fiiqid iyo biyo daadis ka bixi wayey. Weerar cir iyo dhul ah oo ay soo qaadeen ciyaartoyda Arsenal isla markaana 3 ciyaartoy badal lagu soo galiyey Arsenal waxaa ka hor yimid darbi difaac oo ay dhigteen wiilasha Owen Cole oo wacad ku marey in gurigooda Reebok aan galabta lagaga badin.
Laakiin daqiiqadii 89-aad Arsenal waxaa laga soo galey meelaha ay ka jilicsan tahay oo ay ka mid tahay Koornada waxaana Koorno ay heshay Bolton si xarago leh madaxa ula helay weeraryahanka reer Isra’il Tamir Cohen oo difaacyada iyo weerarka Arsenal oo soo taagan shabaqada dhex dhigey kubada madaxa uu soo hirdiyey. Cohen ayaa markii uu goolka guusha u saxiixay kooxdiisa Bolton wuxuu la soo baxay funaanad uu hoos ka gashanaa oo sawirka Aabihiiskii dhawaan geeriyooey Avi Cohen uu ugu sawiran yahay isagoo sheegay in uu ugu tacsiyeynayey goolkaasi uu dhaliyey.
Avi Cohen oo ka mid ahaa ciyaartoydii soo martey Liverpool bishii Janaury ayuu shil baabuur ku dhintey gudaha Isra’il.
Si kastaba ha ahaatee Arsenal waxaa sugaysa inay u dagaalanto kaalinta labaad oo ay Chelsea kaga horeyso 3 dhibcood, ama inay hubsato sii hasashada kaalinta sadexaad.
Arsenal Maalinta Axada oo bisha May ku beegan 1 ayay gurigeeda Fly Emirates waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda Man United oo doonaysa inay ku guuleysto markii 19-aad koobka Premiershipka.
Aniga & taageerayaal badan oo Arsenal ah waxaan sugnaa guusha Arsenal ka soo hoyn karto afarta kulan ee wiilasha macalin Arsene Wenger oo aan leenahay meesha iska qaada oo niyad jabka ka qaadaa teegaarayaashiina.